क्वारेन्टिनमा जोखिम मोल्दै हजारदिने आमा र बच्चा
बाजुरा, २९ जेठ । भारतबाट फर्किएका एक गर्भवती महिला क्वारेन्टिनमा नै सन्तानको जन्म दिइन् । क्वारेन्टिनमा सन्तानको जन्म दिँदा एउटी आमाको मन कस्तो हुन्छ होला ? त्यही अनुभव साटेका छन् एक आमाले ।
जिल्लाको बूढीगङ्गा नगरपालिका–१ कुणीका २२ वर्षीया तुल्छी चदारा धुराल्सैन माविको क्वारेन्टिनमा १४ दिनको सुत्केरी हुनुहुन्छ । चदाराले पहिलो सन्तानका रुपमा छोरीलाई क्वारेन्टिनमै जन्म दिनुभयो । बिहान बेलुकाको छाक टार्ने नोकरी छुट्नु, चारदिनको भात्रेकभोकै भारतबाट नेपालको यात्रामा हिँड्नु, त्यसपछि घर नजिक पुगिसकेपछि पनि क्वारेन्टिनको बास हुन पुगेको दुई दिनपछि सुत्केरी हुनु उहाँलाई दुर्भाग्य जस्तै लागेको छ ।
उहाँलाई सुत्केरीको बेला थप खाना त कहाँ हो कहाँ अरु बेलाजत्तिको खान पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । एक वर्ष अगाडिको नवविवाहित जोडी उहाँको सपना, भारतकै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा सन्तानको जन्मदिने, दुवैजनाले सकेजति रोजगारी गर्ने योजना थियो तर त्यो भएन, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतमा लकडाउन भई बेरोजगार हुँदा घर फर्किनु प¥यो ।
एक वर्षमै सपनामा सीमित भएर एउटा विद्यालयको चिसो सिमेन्टमा छोरीको जन्म दिनुप¥यो । उहाँलाई अहिले सन्तानलाई कसरी बचाउने भन्नेमात्र चिन्ता छैन । आफू र आफ्नो परिवारलाई नै कसरी बचाउने भन्ने पिरलो छ । चदाराको जस्तै पीडा सोही क्वारेन्टिनमा बसिरहेकी अमृत परीको पीडा झन कष्टपूर्ण छ । भारतमै सुत्केरी भइन् । त्यसको १५ दिनमै बसको यात्रा गरेर नेपाल पुगिन् । अस्वस्थ शरीर, लगातार चार दिनसम्म भोकभोकै हिँड्नु, उहाँका लागि सजिलो थिएन, तैपनि घर पुग्नुभयो ।
उहाँलाई लागेको थियो आफूजस्ता गर्भवती र सुत्केरीलाई छुट्टै ठाउँमा व्यवस्थापन हुन्छ । तर त्यो अवस्था पनि भएन । उहाँजस्तै सातजना गर्भवती र सुत्केरीसँगै ३० जनालाई एउटै कोठामा राख्दा बाटोको यात्रा भुलेर क्वारेन्टिनको बास भएपछि शरीर दुख्ने, ज्वरो आउने र रक्तश्राव पनि शुरु भयो । बाह्र दिनको क्वारेन्टिनको बास हुँदा अहिलेसम्म पनि उहाँको पेट कहिल्यै भरिएको छैन ।
चदारा र परी परिवारका सपरिवार भारतबाट फर्केर यतिबेला बूढीगङ्गा नगरपालिका–१ को धुरालसैन माविको क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हजारदिने आमा र बच्चालाई हरेक बार खाना र उपचारको आवश्यकता हुन्छ । तर त्यो अवस्था क्वारेन्टिनमा छैन । श्रीमान् पनि क्वारेन्टिनमै भएका कारण बाहिरबाट थप पोषिलो खाना खुवाउने, स्याहारसुसार गर्ने कोही नहँुदा निकै समस्या भएको तुलसी चदाराका श्रीमान् विनोद चदाराको दुखेसो छ ।
सुत्केरीका लागि आरामसँग छुट्टै सुत्ने कोठा र बच्चाका लागि न्यानो ओढ्ने ओछ्याउने कपडा छैन । यता जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्त भने बाहिरबाट आएका बाजुरेली नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो । बाजुरा जिल्लाभरि २२ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई अन्यभन्दा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सबै स्वास्थ्य शाखालाई ध्यान दिन अनुरोध गरिसकेको उहाँको भनाइ छ । यता नगरप्रमुख दीपकविक्रम शाह भने एकैपटक धेरै सङ्ख्यामा बाहिरबाट आएका कारण भनेजस्तो व्यवस्थापन नभएको बताउनुभयो । तर पनि हामीले हामीसँग भएको स्रोतसाधनबाट क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थापन गर्न दिनरात खटिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजारबाट पैसा दिएर केही पोषिलो खानेकुरा किनौँ भने पनि हाम्रो हातबाट पैसा नै समात्न मान्दैनन् । क्वारेन्टिनको बसाइ एकदमै असहज भएको उहाँको भनाइ छ । आफूलाई आरडिटी परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको र बच्चालाई नेगेटिभ देखिएको उहाँको भनाइ छ । यो अवस्थामा बच्चालाई स्याहार गर्न निकै समस्या भएको छ । यता मालिका माविको क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिलाई खाना खुवाउने जिम्मा लिएका कर्णबहादुर महतले भने हामीले बिहान बेलुका खाना र दिउँसो उपलब्ध भएको नास्ता कसैलाई पनि नछुटाएर खुवाएको बताउनुभयो । दैनिकजसो फलफूल उपलब्ध गराउन नसके पनि हप्ताको तीन÷चार दिन फलफूलको पनि व्यवस्था गरेको महतको भनाइ छ ।
अहिले मालिका माविको क्वारेन्टिनमा बडिमालिका नगरपालिकाका २६ जना रहेका छन् । जसमा ६ जना बालबालिका रहेका छन् । त्यसैमा पनि एक बालक र दुईजना आमामा आरडिटी पोजेटिभ देखिएको र पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी धनगढी प्रयोगशालामा पठाइसकेको बडिमालिका स्वास्थ्य शाखाका टेकबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
बूढीगङ्गा र बडिमालिका नगरपालिकामा मात्र होइन जिल्लाभरिकै क्वारेन्टिनमा बसेका सुत्केरी तथा गर्भावस्थाका महिला र बालबालिकाले क्वारेन्टिनमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइराखेका छन् । एक त रोगले सङ्क्रमण गर्ने हो कि ? भन्ने चिन्ता छ, अर्को सुत्केरी हुँदा बच्चा र आमाका लागि पोषिला खानेकुरा, सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम उच्च दरले बढ्ने देखिएको छ ।